Barnaamij ku hadlaya af- iswiidhish sahlan oo qaxootiga loogu talo galay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Susanna Westberg oo ka hawlgasha xafiiska shaqada ee magaalada Stockholm. sawir: Mona Ismail Jama/Sveriges Radio
Barnaamij ku hadlaya af- iswiidhish sahlan oo qaxootiga loogu talo galay
Habka shaqada loo helo
La daabacay torsdag 23 november 2017 kl 12.00
Laga bilaabo maanta ayey xafiiska shaqada, arbetsförmedlingen, barnaamij toos ah halka lugu hadlayo af- iswiidhish sahlan, lätt svenska, laga qeeyb qaadan kara.
-Moobilka, kambyuutarada iyo waxaa loo yaqaano surfplatta ayaa barnaamijkan laga daawan karaa, sidaas ayey sheegtay Susanna Westgren oo xafiska shaqada ka shaqeeysa.
Barnaamijkan ayaa lagu shaacinaya aalada internetka ee Bambuser. Susanna Westgren ayaa ka hawlgasha xafiiska shaqada ee magaalada Stockholm. Wexeey sheegtay in qof kasta oo iska sejela bogga xafiiskani ka qeeyb qaadan karo barnaamijkan meel kasta oo u waddanka ka joogo.
Sababta loo sameeyay barnaamijkan ,oo sida ay iyadu u sheegtay soo baxi doona hal jeer bishii, ayaa ah qaxootiga faraha badan ee waddanka yimid wakhtigii ugu dambeeyey. Madama ay ku adkaatay kuwan in ay ka qeeyb qaatan warbixinada la xidhiidha suuqa shaqada iyo habka loo dalbado waa in aan anagu u sahalno si ay bulshadda u soo dhex geli lahaayeen, ayey sheegtay Susanna Westgren oo xafiiska shaqada ka shaqeeysa.
Sido kale ayuu barnaamijkani u surtogalinayaa daawadayaasha in ay si toos ah ula xidhiidhan shaqaalaha xafiiska shaqada iyo qofka barnaamijkan tebinaya, hadii ay su´aal barnaamijka ku saabsan hayaan amba ay doonayaan in mawduuc ay iyagu xiiso u leeyehiin laga hadlo, ayey Susanna Westgren u jeeda.
Wexeey rajeeynaysaa in barnaamijkani mustaqbalka ku soo baxo luuqadaha, daari, soomaali, tigrinya iyo carabi.
-Waa gool aan rajeeynayno in aan dhawaan gaadhno, waa sida ay hadalka u soo dhigtay Susanna Westgren oo xafiiska shaqada ee magaalada Stockholm ka hawlgasha.